Mmemme mgbede - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Ịgbazi ọrụ, ndụ na ụlọ akwụkwọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka. BLI nwere ihe iji nyere aka. Ugbu a, anyị amalitela ọmụmụ uhuruchi iji nyere aka mee ka nkà mmụta asụsụ gị dịkwuo mma na inyere aka nweta ihe mgbaru ọsọ gị. Ụlọ ọrụ anyị na-ahụ maka nlezianya ejiri nlezianya mepee usoro ọmụmụ zuru ezu nke kwekọrọ na usoro ọrụ gị. Ị ga-enwe klas ugboro abụọ n'izu maka awa abụọ, na ụlọ akwụkwọ dị na ya.
Anyị na-enye obere klas nke na-enyere gị aka inweta nlebara anya gị na iwulite obi ike. A na-emegharị usoro anyị iji lekwasị anya na nkà nkwurịta okwu gị. Site na ịga mmemme mgbede anyị, ị ga-enwe ohere izute ndị mmadụ site na ọtụtụ ndị ọkachamara, nke nwere ike inyere gị aka ịgbasa ọrụ netwọk gị ma kwalite ọrụ gị.